China Elu Mount IP66 New Waterproof BS Socket ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Feilifu
IP66 Plastic Herọd
IP55 Gbanye & Socket
Shei (w / o Ngwa)
Ihe ngbanwe & Sockets
IP66 Gbanye & Sockets
New IP66 Gbanye & Sockets
Mepee Cover Cover
Pịnye Ngwaọrụ 45
Pịnye 128 Ọrụ Ngwa
Pịnye 118 Sockets
Pịnye 50 modul
Pịnye 32 Modul
AD2GEE IP66 Ihe mkpuchi efu
ADL-01SR German Socket Ngwa
IP55 Series Waterproof Mkpa Gbanye + BS Socket + Sch ...
Ihe mkpuchi IP66 efu
FZ528 Isiokwu Socket
FZ502 Socket Isiokwu
Elu Elu IP66 New BS BS Waterproof
Nabata obere iwu: Ee
Ebe Mmalite ： WenZhou, China
Aha Akara ： ADELS
Nọmba atụ ： ADLN66-S 、 ADLN66-2S 、 ADLN66-SS 、 ADLN66-S2S 、 ADLN66-S3S
Pịnye ： Oghere Mgbidi
Ntuziaka ： ：kpụrụ ọkọlọtọ
Volta gosiri ： 250V ~
Gosiri Ugbu A ： 13A
Ngwa ： Ebe obibi / General-Purpose
Zitere anyị emailBudata dị ka PDF
ADL66 usoro nke mgbidi-n'ịnyịnya mmiri àmà mgba ọkụ & anya nwere 4 ụdị IP66 waterproof igbe size na-anabata 6 usoro ọrụ ngwa, gụnyere Multi-ọrụ anya, BS anya, Schuko anya, French anya, South African anya, 1 òtù mgba ọkụ, 2 òtù mgba ọkụ. Ngwa ọrụ niile nwere ike ijikọta n'ime kpamkpam.
Anyị produts na-n'ọtụtụ ebe na ubi, kichin, ụlọ ịwụ, mbara ihu, ụgbọ ala ịsa, ọdụ ụgbọ mmiri, mbupu, oyi nchekwa, wdg, dị ka mmiri mmiri ma ọ bụ ịgba gburugburu ebe obibi.
DC Max Ike Ikefe
-20 ~ 55 Celsius
Impedance (ọdụ ụgbọ mmiri niile)
Art.No. Nkọwa Gosiri Volta Ugbu A Ntụle IP Ileba ihe (họrọ) Cover Agba (Selectable)
1 Gang BS Socket 16A-250V ~ IP66 ABS / PC Piel / White / Yellow
ADLN66-2S 2 Ndi otu BS Socke 16A-250V ~ IP66 ABS / PC
ADLN66-SS 1 Gang Gbanye +1 Gang BS Socket 16A-250V ~ IP66 ABS / PC
ADLN66-S2S 1 Gang Gbanye +2 Gang BS Socket 16A-250V ~ IP66 ABS / PC
ADLN66-S3S 1 Gang Gbanye +3 Gang BS Socket 16A-250V ~ IP66 ABS / PC
Njirimara na Uru
1. Ogologo oge na-adịgide adịgide nke nwere nnukwu mmetụta na-eguzogide ma ọ gaghị agbawa ma ọ bụ nwụọ.
2. Ndobe, dị mfe imeghe, mkpuchi mkpuchi nke na-enye ezigbo nchekwa mmiri mgbe emechiri. Plọg nwere ike jikọọ ya na ngbanwe ahụ na-enweghị na-emetụta akara nke mkpuchi ahụ.
3. 1 * M25 na 2 * M20 ikike ikike nhọrọ na mfe ịghasa akara mkpuchi imewe maka eriri njikọ.
4. Ọkwa dị elu nke nchebe pụọ na nsị site na jets mmiri na uzuzu, akàrà na-adịgide adịgide ga-ejigide iguzosi ike n'ezi ihe na ndụ ngwaahịa ahụ.
5. Wunye padlock ozugbo iji gbochie izu ohi eletrik. Mgbe ịchọrọ ọkụ eletrik, ịnwere ike imeghe ya n'oge ọ bụla. Mkpọchi mkpọchi nwere ike izere imeghe n'amaghị ama.
Nke gara aga: IP66 Ntughari ohuru ohuru na Transparen Cover French Socket
Osote: IP66 New Series Australia Socket
Ip66 Socket tinyekwa
Nchekwa Ip66 Mmiri & Djá
Ip66 Weather Ma ustjá Na-echebe
Ip66 Ikuku Weatherproof N'èzí
IP66 New Series Waterproof Socket 2 Australis S ...
IP66 New Series Waterproof Socket 1 òtù 16A Sw ...
IP66 New Series Waterproof Socket 1 òtù Multi ...
Ekwentị: 0086- (0) 577-62797750 / 60/80
Faksị: 0086- (0) 577-62797770
Ntuziaka zuru ezu maka ntinye IP adịghị - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7 You nwere ike ihu ngwaahịa ndị nwere akara na ha ma ọ bụ na ngwugwu ha, dị ka IP44, IP54, IP55 ma ọ bụ ndị ọzọ yiri ya. Ma ị maara ihe ihe ndị a pụtara? Ọfọn, nke a bụ koodu mba ụwa nke ...
Anyị niile na-ahụ ntụaka maka ngwaọrụ ndị na-enweghị mmiri, ngwaọrụ ndị na-eguzogide mmiri na ngwaọrụ ndị na-ere mmiri na-atụba na ngwaahịa eletrọniki. Ajụjụ buru ibu bụ: Kedu ihe dị iche? Enwere otutu ederede edere na isiokwu a, mana anyị chepụtara na anyị ga-atụba ọnụọgụ abụọ anyị na ta ...
Kedu ihe bụ ntọala ala? Ogwe aka nke ala bụ ihe nkwụnye nkwụnye nke dị n'ime ala. Enwere ike ime ụdị a ụdị maka plọg dị iche iche, mana a na-ejikarị ya maka njikọ eletriki, ekwentị, ma ọ bụ eriri. A na-achịkwa ojiji nke ntọala ala site na koodu iwu n'ọtụtụ ...
Copyright - 2010-20122: All Rights echekwabara.